आज धमाका बालिका धेरै छन्। र समय समयमा यो नीरस छ। Fringe - यो कैंची को मद्दतले छुटकारा गर्न असम्भव छ, जो देखि Hairstyles को भाग छ। तर bangs सखाप गर्न सकिन्छ। फिर्ता बढ्दै र आफ्नो आँखा मा चढती र हजामको भ्रमण गर्न समय कसैले काममा हस्तक्षेप bangs, पर्याप्त छैन - कसैले त्यो अझै थाकेको, कसैको। र त्यसपछि सोधेर को बालिका: "एक धमाका छुरी हान्नु कसरी सुन्दर?"। सुन्दर छुरा प्रहार bangs - यो, एउटा महत्त्वपूर्ण विवरण छ यो पहनता गर्ने एक को व्यक्तित्व, emphasizing। यो तपाईं, आराम काम गर्न खेल खेल्न बच्चाहरु खेल्न र बस अनुमति दिन्छ ठूलो हेर्न।
बारेमा आश्चर्य कारणहरू कति सुन्दर छुरी हान्नु धमाका, त्यहाँ धेरै हुन सक्छ। सबै को पहिलो, यो छवि परिवर्तन गर्न इच्छा छ। लामो प्रक्रिया सक्षम नरमाइलो लाग्यो हो भनेर - एक धमाका बढ्दै। Regrown fringe नजरमा चढ्नु सुरु, यो हेर्न सामान्य रोक्छ। र मात्र तरिका - यो वध छ। सायद तपाईं bangs छुटकारा गर्न चाहन्न, तर बस क्रममा यसलाई ल्याउन समय पाउन सक्दैन, त्यसैले यो तपाईं रोक गर्नुपर्छ? अन्तरिम उपाय रूपमा पिन प्रयोग गर्न पनि राम्रो छ। या शायद तिमी सिर्फ आफ्नो लग संग परीक्षण गर्न चाहनुहुन्छ? त्यसपछि थुप्रै तरिकामा कसरी राम्रो छुरी हान्नु bangs, तपाईं धेरै उपयोगी हुनेछ।
एक धमाका छुरी हान्नु अर्को कारण - यो ताजा हावा मा एक लामो पैदल छ। हावा bangs मात्र हस्तक्षेप र unkempt हेर्न हुनेछ।
वध bangs परिणाम कपाल चिटिक्क र सुन्दर थियो कि यस्तो हुनुपर्छ। यो अवसर, वस्त्र को शैली मेल र बनाउन-अप गर्नुपर्छ। bangs छुरी हान्नु एउटा तरिका छनौट अर्को शब्दमा, मा, यो पूरक थियो छवि कस्तो विचार गर्न आवश्यक छ।
सुन्दर bangs छुरी हान्नु देखि? सबै को पहिलो, तपाईंले आफ्नो कपाल धुन गर्नुपर्छ, सफा गर्न bangs। बिछाउने अघि आफ्नो बाल प्रकार को लागि उपयुक्त छ कि एक सानो mousse वा अन्य साधन लागू गर्न सम्भव छ। त्यसपछि तपाईं bangs अलग गर्न आवश्यक छ। यो गर्न, एक सपाट कोर्नु प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो कपाल अब एक बाधा छ, र राम्रो s फिर्ता संकलन गर्न। सुकाउने bangs एक हेयर ड्रायर र एक राउन्ड hairbrush प्रयोग गर्न आवश्यक लागि, त्यसपछि यो समतल चिल्लो र सिद्ध झूट हुनेछ। त्यसपछि ड्राई बाँकी केश। अब तपाईं bangs पिन गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
जो आफ्नो bangs को लम्बाइ, त्यहाँ उनको सुन्दर छुरी हान्नु गर्न विश्वव्यापी तरिकाहरू छन्। पहिलो विकल्प - यो एक उच्च poluhvost छ। यस्तो स्टाइल लामो bangs, वा bangs मध्यम लम्बाइ अनुहार rejuvenates र यसलाई रिफ्रेस। तपाईं टाउको को शीर्ष गर्न कंघी को आसन्न कपाल को एक सानो भाग एक धमाका सङ्कलन र poluhvost गठन छुरी हान्नु आवश्यक यसो गर्न। चंचल र सजिलो केश , flagella तिनीहरूलाई रोल र आफ्नो टाउको मा सुरक्षित धेरै टुक्रा मा bangs विभाजन गरेर प्राप्त भएको छ। केश बाँकी अलिकति घुमाउरो गर्न सकिन्छ। यो सिर्फ राम्रो र छ छिटो। केश टहलने लागि सिद्ध छ। तपाईं पनि बस bangs फिर्ता slicked र अदृश्य कस्नु गर्न सक्नुहुन्छ। सुन्दर bangs संग Hairstyles समाधान छेउमा गर्न bangs गर्न सजिलै यदि गर्न सक्नुहुन्छ।
लामो bangs घुमाउरो र छेउमा भेला गर्न सकिन्छ। यो एउटा विकल्प हो रेट्रो शैली। तपाईं आफ्नो कपाल पछाडि वा नजिकै combing, एक bouffant शैली डिस्को बनाउन सक्छ। अर्को रोचक तरिका - bangs को pigtail चुल्ठो र यसलाई छेउमा कस्नु गर्न। विकल्पहरू मूल bangs, धेरै चयन गर्न। एक कल्पना हुन - र नवीनतम रोचक केश प्राप्त।
टाउको, कसरी बाल विकास बलियो बनाउन मा बाल वृद्धि कसरी बढाउने?
को tendons को सुनिंनु